थाईल्याण्डको लागि भ्याकेसनहरू | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | सुझावहरू, थाईल्याण्ड
विश्व एक विशाल र विविध स्थान हो र यदि हामी सतर्क यात्रीहरू हौं भने यो सधैं हाम्रो गन्तव्यमा एक सानो अनुसन्धान गर्न सल्लाह दिइन्छ: पेट्रोनमी, सुरक्षा, यातायात, सामाजिक रीतिथिति र अवश्य पनि, vaccinations.
हामीले खोप लगाएपछि जीवन अलि सरल भएको छ, तर सबै देशहरूले एउटै खोप योजना पछ्याउँदैनन् र विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रकारका स्थानीय रोगहरू छन् जुन यात्रीले विचार गर्नुपर्दछ। दक्षिण पूर्व एशिया एक क्लासिक गन्तव्य हो जब खोपहरूको बारेमा सोच्दा, थाईल्याण्ड जानको लागि कुन खोपहरू आवश्यक छ?
2 थाईल्याण्डको लागि यात्रा गर्नको लागि खोपहरू आवश्यक पर्‍यो
थाईल्याण्डको किंगडम, पहिले सियामको रूपमा चिनिन्थ्यो, ती देशहरू मध्ये एक हो जुन यस बनाउँछ दक्षिण पूर्व एशियाई प्रायद्वीप। यो 76 provinces प्रान्त र छ यो करिब million करोड मानिस बसोबास गर्दछ। यसको राजधानी हो बैंकक र यसको वरपर अरू लोकप्रिय गन्तव्यहरू छन् जस्तै लाओस, म्यानमार, कम्बोडिया, भियतनाम वा मलेशिया।
यो स्पेन भन्दा अलि ठुलो छ र यसको भूगोलमा पहाडहरू र स्पष्ट क्षेत्रहरू छन्, यसको मुख्य धमनी प्रख्यात मेको is्ग नदी हो र थाइल्याण्डको खाडी, यसको 320२० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको पर्यटन आइकनहरू मध्ये एक हो। यसको जलवायु उपोष्णकटिबंधीय हो त्यसैले तातो र आर्द्रता धेरै को लागी उत्तम प्रजनन स्थल हो ट्रपिकल रोगहरू। त्यहाँ मानसून, बाढी, धेरै वर्षा र धेरै गर्मी छन्।
थाईल्याण्डको लागि यात्रा गर्नको लागि खोपहरू आवश्यक पर्‍यो
सिद्धान्त मा सबै तपाइँको मूल देश मा निर्भर गर्दछ किनभने त्यहाँ जहाँ तपाईंको देशको खोप अनुसूची खेलमा आउँदछ। एक पटक जब तपाइँलाई थाहा छ तपाइँसँग कुन खोपहरू छन् किनकि तपाइँको आमा बुबा बुबाले तपाइँलाई सानो उमेरदेखि नै उमेर क्यालेन्डरको कडाइका साथ दिईएको छ।
थाईल्याण्डको लागि यात्रा गर्न तपाईलाई हेपाटाइटिस ए, टाइफाइड ज्वरो, ट्रिपल भाइरस विरूद्ध खोप लगाउनु पर्छ (रुबेला, मम्प्स र दादुरा) र त्यो टिटानस-डिप्थीरिया। यी मध्ये केहि, यदि सबै छैन भने सामान्यतया खोप योजनामा ​​समावेश हुन्छन्, तर ती पूरा गर्नु पर्दैन। त्यो अवस्थामा, केहि महिना अगाडि सुरु गर्न यो सुविधाजनक छ किनकि उदाहरणको लागि, टिटानसलाई दुई खुराक चाहिन्छ। खोप विरुद्ध हेपाटिस बी पनि सिफारिस गरिएको छ थाईल्याण्ड जानको लागि यदि तपाईं अविवाहित हुनुहुन्छ र यौन सम्बन्ध राख्ने योजना बनाउनुहुन्छ किनकि यो फ्लुइडबाट संक्रमित छ।
यदि तपाईंलाई जनावरहरू मनपर्न सक्छ भने रेबीज खोप तपाईं यसलाई र उस्तै विचार गर्नुपर्छ मलेरिया। यो त्यस्तो छैन कि यस अन्तिम रोग विरूद्ध खोप छ तर एक औषधि जुन तपाईंले यात्रा गर्नु अघि, यस समयमा र पनी लिनै पर्छ। सत्य यो हो कि यो धेरै रमाईलो छैन र कहिलेकाँही यो नराम्रोसँग खस्दछ। म मानिसहरूलाई चिन्छु जसले साइड इफेक्टका कारण उपचारलाई त्यागेका छन्, तर मेरो लागि तपाईले लागत-लाभ अनुपातमा विचार गर्नुपर्छ। मलेरिया बेकार छ।
तातो ठाउँहरूमा लामखुट्टेहरू राजा हुन्छन् र औलो एक मात्र खतरनाक रोग मात्र होइन। केहि समय को लागी डेंगू र जीका भाइरस तिनीहरू पोडियममा पनि छन् र थाइल्याण्ड पनि यसको अपवाद छैन। विशेष गरी यदि तपाइँ उत्तर र देशको केन्द्र र वर्षा inतुहरूमा हिड्दै हुनुहुन्छ। राम्रो विकर्षक, कडा र स्थिर, तपाईलाई धेरै मद्दत गर्दछ। एक सामान्य विकर्षक होइन तर ट्रपिकल क्षेत्रहरूको लागि वास्तवमै विशेष हो।
कृपया दिमागमा राख्नुहोस्, कृपया, सबै चीज एक लामखुट्टेले डसेको हुँदैन वा कुनै जनावरले टोक्ने वा असुरक्षित यौन सम्बन्धमा पर्दैन। त्यहाँ ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन् जुन खानाहरू र पेय पदार्थहरूमा उपस्थित हुन सक्छ र थाइल्यान्ड सफाईको मा धेरै सावधान देश होइन। ग्यास्ट्रोनोमी ताजा खानामा आधारित छ र पूर्ण रूपमा पकाइएको छैन, त्यसैले हामीले खाना पकाउने र लुगा धुने विधिहरू बिर्सनु हुँदैन। स्पष्ट रूपमा, तपाईं टाढा स्ट्रिट स्टलबाट हुनुहुन्छ, उत्तम।
यदि तपाईं स्पेनमा बस्नुहुन्छ भने, तपाईं स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ र यदि होईन भने, तपाईंलाई संक्रामक संक्रामक रोगहरूको विशेषज्ञता भएको अस्पतालमा जानुहोस् जुन तपाईंलाई त्यहाँ सूचित गर्न सक्दछ। धेरै दक्षिण अमेरिकी देशहरू (अर्जेन्टिना, ब्राजील, भेनेजुएला, बोलिभिया, पेरू, उरुग्वे वा कोलम्बिया) को नागरिकका लागि थाइल्यान्डलाई खोपको प्रमाणपत्र चाहिन्छ। जन्डिस अद्यावधिक गरियो, जबसम्म तपाईं आफ्नो घर देश बाहिर छ महिना भन्दा बढी बसोबास गर्नुहुन्न।
के तपाई देशमा प्रवेश गरीएको खोप लगाउन सक्नुहुन्छ? यो सम्भव छ थाईल्याण्डमा तपाईले ती ठाउँहरू परिवर्तन गर्नु भयो जहाँ यो तपाईको मूल योजनामा ​​थिएन। हो, त्यहाँ सिमाना वा केही एयरपोर्टमा स्वास्थ्य कार्यालयहरू छन् र तपाईले तिर्नुहुन्छ र तिनीहरूले तपाईंलाई त्यहाँ दिन्छन्। अर्को टिप, मेरो लागि आधारभूत, त्यो तपाईंले गर्नु पर्छ स्वास्थ्य बीमा छ। केहि मानिसहरु बिना एक दुनिया भर मा जान्छ, तर वास्तवमा चिकित्सा धेरै ठाउँमा महँगो छ र थाईलैंड मा यो मामला छ।
अप-टु-डेट खोप, स्वास्थ्य बीमा र यी केहि सावधानी उनीहरूले तपाईलाई थाईलैंडमा छुट्टीको आनन्द उठाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्नेछन् चिकित्सा दुर्घटनाहरूको पीडा नगरी: केवल बोतलको पानी पिए, दाँत माझ्नसमेत, स्ट्रीट स्टोभमा नखानु, फलफूल र तरकारीहरू राम्रोसँग धुने कोशिस गर्नुहोस् यदि तपाईले आफैंमा यसलाई किन्नुभयो वा खानु भयो भने! धेरै होशियार हुनुहोस् यदि तपाईंले बाँदरहरू नजिक पुग्नुभयो!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » सुझावहरू » थाइल्याण्डको लागि भ्याकेसनहरू